यि हुन एक अर्का संग नबाेल्ने बलिउडकि चर्चित नायिकाहरू , कारण सहित ! – ताजा समाचार
यि हुन एक अर्का संग नबाेल्ने बलिउडकि चर्चित नायिकाहरू , कारण सहित !
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेत्रीहरु पनि छन् एकअर्कालाई घृ*णा गर्छन् । उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर ठुलै चर्चा हुने गर्छ ।प्रियंका चोपडा र करिना कपुर एकअर्कालाई घृ*णा गर्छन् । यसको कारण साहिद कपुर भएको बताइएको थियो । साहिदलाई लिएर करिनालाई प्रियंकाले कटा*क्ष गरेपछि उनीहरुबीचको बोलीचाली बन्द भएको थियो ।
त्यस्तै रनवीर सिंहका कारण अनुष्का शर्मा र दीपिका पादुकोणबीच पनि झ*गडा भएको थियो । उनीहरु पनि एकअर्कालाई घृ*णा गर्छन् ।रानी मुखर्जी कुनै समय अभिषेकसँग लभ अफेयरमा रहेकी थिइन् । तर, ऐश्वर्या पाएपछि उनले रानीलाई धो*का दिए । उनीहरुबीच पनि दुश्म*नी रहेकोछ ।
कुनै समय माधुरी दीक्षित र श्रीदेवीबीच ठुलै प्रति*स्पर्धा रहेको थियो । यसै कारण उनीहरुबीच कटु*ता पनि बढेको थियो । केही वर्ष अगाडि श्रीदेवीको मृ*त्यु भइसकेको छ । बलिउडका अर्का कट्टर दुश्मन दीपिका र कटरिनालाई मानिन्छ । रनवीर कपुरका कारण यी दुईबीच ठुलै झग*डा परेको पनि बताइन्छ ।सोनाम कपुरले ऐश्वर्यालाई अन्टी भनेपछि यी दुई अभिनेत्रीबीच दुश्मनी सुरु भएको थियो ।
पढ्ने लेख्ने मानिस असल र नपढ्ने जमात चाहिँ खराब । अझै पनि यही दृष्टिकोणबाट मानिसहरुलाई विश्लेषण गर्ने काम गरिन्छ । बलिउडमा यस्ता कहियौँ अभिनेत्रीहरु रहेका छन् जो पढाईमा निक्कै दख्खल रहे भने फिल्मी लाइफमा भने आफ्नो करिअर मजबुत बनाउन अस*फल भए ।
तर, कम पढेका बलिउड स्टारहरु पनि छन् जसले बलिउडमा बेग्लै स्थान बनाइसकेका छन् । केही यस्तै बलिउड सेलिब्रिटीहरु रहेका छन् जसले १२ कक्षामात्र पास गरेका छन् । तर उनीहरु बलिउड जीवनमा भने अत्यन्त सफल भएका छन् ।
प्रिंयका चोपडालाई देख्दा लाग्छ उनले ठुलै विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गरेकी छिन् । सन् २००० मा मिस इण्डिया समेत भएकी प्रियंका कक्षा १२ पास मात्र हुन् । उनले मुम्बईको एक विश्वविद्यालयमा भर्ना त हालिन् तर पढ्नै गइनन् ।
बलिउडमा कपुर परिवारलाई पढाइ पुरा नगर्ने परिवारको रुपमा लिइन्छ । कपुर खानदानकी छोरी करिश्मा कपुरले त अझ ६ कक्षामा पढ्ने क्रममा नै पढाइ छोडदिएकी थिइन् । पछि उनले फिल्म ‘प्रेम कैदी’ बाट आफ्नो बलिउड करिअर सूरु गरेकी थिइन् ।
आफ्नो दिदी झै करिना कपुरले पनि पढाइलाई महत्व दिइनन् । तर, उनले कक्षा १२ सम्मको पढाइ भने पुरा गरिन् । पछि उनले मिठीबाइ कलेजमा भर्ना त गरिन् तर बलिउडले उनको पढाइ भंग गरिदियो । फिल्म ‘रिफ्युजी’ मा इन्ट्री पाएपछि उनले बलिउडमै आफ्नो ध्यान बनाइराखिन् ।
आज बलिउडकी सबैभन्दा महँगी नायिकाको रुपमा परिचीत यी अभिनेत्री पनि ग्रयाजुएट होइनन् । कक्षा १२ को पढाइ सकेपछि उनले ब्याचरलको पढाईका लागि फर्म त भरिन् तर मोडलिङमा लागेपछि पढाइ अधुरै छोडिन् ।
बलिउडकी यी क्वीट एक्ट्रेस पनि व्याचलरको पढाइ पुरा गर्न सकिनन् । आलियाले मुम्बइमा रहेको जमानाभाई नरसी स्कुलमा कक्षा १२ सम्मको पढाइ गरेकी थिइन् । तर, त्यस लगत्तै उनलाई फिल्म ‘स्टुटेण्ड अफ द इयर’ मा आएपछि उनले व्याचरलको पढाइ छोडिदिइन् ।
बलिउडको दुनियाँमा सबैभन्दा सुन्दर युवतीको रुपमा परिचित पुर्व मिस वल्र्डले आफ्नो पढाइ बिचमै छोडि दिएकी थिइन् । सानो उमेर देखिनै मोडलिङमा सोख राखेकी यी अभिनेत्रीले पनि पढाइतिर ध्यान दिन चाहिनन् ।